माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका ! – yuwa Awaj
माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका !
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्णायक शक्ति बनेका छन् । अब उनले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको टकरावमा जसलाई समर्थन गर्छन् उही बलियो हुन्छ ।
तर, यी दुईको वि’वादले नेकपाभित्रको राजनीतिक पासा यसरी पल्टने अवस्था बन्दैछ कि माधव नेपाल सबैभन्दा शक्तिशाली बन्दैछन् । नेकपाभित्रको मुख्य शक्तिमध्येका केपी ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल कोही पनि बहुमतमा नरहेको देखिदैछ । अब दुई नेता मिल्दा मात्र बहुमतको अवस्था हुन्छ ।
यसकारण ओली र प्रचण्डबीचको विवादमा नेपाल निर्णायक शक्ति बनेका हुन् । उनले तेस्रो शक्तिका रुपमा राजनीतिमा बाजी मार्न खोजेको देखिदैछ । नेपाललाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने गरी आफ्नो पक्षमा पारेको बुझिएको छ । दशैं अघि नै दुई नेताबीच सहमति बनेको हो ।
प्रचण्डले पटक पटक ओलीसँग सहमति गरेपनि आफूलाई पेल्ने शैली देखेपछि बरु नेपाललाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने गरी कबठोर कदम चाल्ने गरी बढेको बुझिएको छ । अहिले माधव नेपाल अगाडि बढेपछि उनलाई मनाउन प्रधानमन्त्री ओली स’क्रिय भएका छन् । उनले दशैंताका र त्यसपछि गरी तीनपटक नेपालसँग भेटिसकेका छन् ।
राजनीतिक लेनदेनको कुरा गरेका छन् । विशेषगरी भावी अध्यक्षका लागि सहयोग गर्ने देखि पूर्व एमालेबीचको एकतामा जोड दिएका छन् । तर, प्रचण्ड र वामदेव ओलीसँग सम्झौताका लागि तयार हुँदा पनि नेपाल नडगमगाएकाले यसपटक उनी सम्झौतामा गइहाल्ने अवस्था छैन ।
नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण देख्न थालिसकेका छन् । ओली र प्रचण्डको वि’वादमा उनले मौका पाउने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । प्रचण्डले नेपाललाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने अवस्था बनेकाले उनले ओलीसँग तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग हुने परिस्थितिमा मात्र सम्झौता गर्न सक्छन् । तर, ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनी बरु अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् ।
Prevधर्म निरपेक्षतालगायतका परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न हुँदै – सभामुख सापकोटा…हेर्नुहोस् ।
Nextप्रदेश १: प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सजिलै हटाउन सक्छ मुख्यमन्त्री…हेर्नुहोस् ।
प्रचण्डलाई जनताको आशा र भरोसा भन्दै छोरी गंगाले दिईन् जन्मदिनको शुभकामना !